Guud Anxiety Disorder | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Guud Anxiety Disorder waa ka itaal badan walwalka caadiga ah. Qof walba waa ka welwelina mararka qaarkood. Laakiin walaaca uu noqdo cudur markay dhacaan ku dhowaad dhammaan waqtiga.
Gaadna waa sort for General Anxiety Disorder. Haddii aad qabto Gaad, aad dareento in aad u walaacsan. Welwelina waa dadka dareen habdhiska hor dhacdo muhiim ah ka heli. Dadka badankood waxay leeyihiin dareen this mararka qaarkood. Laakiin haddii aad dareensan tahay sidan wakhtiga intiisa badan, xataa marka aanad lahayn wax muhiim ah in la sameeyo, laga yaabaa in aad leedahay Gaad.
garaaca wadnaha si dhakhso ah
Waxa kale oo aad u dhaqmaan si ka duwan waxaa laga yaabaa in haddii aad leedahay Gaad.
Waxaad ka fogaan kartaa ama aad joojiso in dhacdooyinka socday (xisbiyada, shaqada, dugsiga, iwm)
Waxa aad noqon kartaa mid aad u cabsi waxyaalo Mana Aadan ahayn mid cabsi ah ka hor inta
Waxaa laga yaabaa inaad ka walwasho aad u badan oo ku saabsan waxyaabaha aad sida caadiga ah uma baahna in ay ku saabsan welwelin.
Waxaa laga yaabaa inaad kolkol wax aad loo isticmaalaa in aan kolkol ka badan ka badan. Kolkol waa marka aad waqti badan ku bixiyaan wax keliya. Tusaale ahaan, laga yaabaa in aad dareento sida aad u leedahay in dhaq gacmahaaga waqtiga oo dhan. Ama laga yaabaa in aad dareento in aad u xun oo ku saabsan wax in warka ah in aadan xukumi karin.
Waxaa laga yaabaa inaad qabto Gaad sababo badan. Qaar ka mid ah sababaha aad leedahay waxaa laga yaabaa in reer Gaad yihiin:
Waad u waayo-aragnimo ku dhibaysa. waayo-aragnimo A argagaxa waa marka wax laga cabsado oo walaac kugu dhacdo. Tusaale ahaan, aad la kulantay dagaal ama ahaayeen dhibane denbi ah
Waxaad lahaa walaaca marka aad ahaayeen ilmo ama wiil dhalinyaro ah.
Waxaad cabbi badan oo aalkolo ama ha qaadan badan oo daroogada.
Waxaad lahaa carruurnimo adag.
Like dhibaatooyin kale oo caafimaadka maskaxda oo dhan, waxaad heli kartaa gargaar Gaad. Dadka da'da ah oo dhan waxay leeyihiin Gaad, iyo waxa ay bilaabi kartaa wakhti kasta. Haddii aad qabto wax welwel wakhtiga intiisa badan, caawimo dhakhtar raadsan.